Yehowa dɔ ne nkurɔfo (1-5)
Asɔfo de nneɛma a enni mu na ɛbɔ afɔre (6-14)
Onyankopɔn din bɛyɛ kɛse wɔ aman nyinaa mu (11)
1 Atemmusɛm: Asɛm a Yehowa nam Malaki* so ka kyerɛɛ Israel ni: 2 “Makyerɛ sɛ medɔ mo,”+ Yehowa asɛm ni. Nanso mubisa sɛ: “Ɛdɛn na wode akyerɛ sɛ wodɔ yɛn?” “Ɛnyɛ Yakob nua ne Esau?”+ Yehowa asɛm ni. “Medɔɔ Yakob, 3 na Esau de, metan no.+ Memaa ne mmepɔw dan amamfo,+ na mede n’agyapade maa sare so sakraman.”+ 4 “Edom reka sɛ, ‘Wɔabubu yɛn, nanso yɛbɛsan akɔ akɔkyekye nea asɛe no.’ Enti nea asafo Yehowa aka ni: ‘Wɔbɛkyekye, nanso medwiriw agu. Na nkurɔfo bɛfrɛ wɔn “amumɔyɛ asaase” ne “ɔman a Yehowa abu wɔn fɔ afebɔɔ.”+ 5 Mo ara mode mo ani behu, na mobɛka sɛ: “Wɔmma Yehowa so wɔ Israel asaase nyinaa so.”’” 6 “‘Ɔba di n’agya ni,+ na akoa di ne wura ni. Enti sɛ meyɛ agya a,+ nidi a ɛfata me no wɔ he?+ Na sɛ meyɛ owura* a, osuro* a ɛfata me no wɔ he?’ Nea asafo Yehowa reka akyerɛ mo ni, mo, asɔfo a mubu me din animtiaa no.+ “‘Nanso mubisa sɛ: “Ɛdɛn na yɛayɛ de abu wo din animtiaa?’” 7 “‘Ɛne sɛ mode aduan* a ɛho agu fĩ ba m’afɔremuka so.’ “‘Na mubisa sɛ: “Ɛdɛn na yɛayɛ de agu wo ho fĩ?”’ “‘Ɛne sɛ moka sɛ: “Yehowa pon+ yɛ adehunu.” 8 Sɛ mode aboa a n’aniwa abɔ bɛbɔ afɔre a, moka sɛ: “Ɛnyɛ bɔne.” Na sɛ mode aboa a ɔyɛ apakye anaa aboa a ɔyare ba a, moka sɛ: “Ɛnyɛ bɔne.”’”+ “Wopɛ a, fa kɔma w’amrado hwɛ. Wugye di sɛ ɔbɛpɛ w’asɛm, anaa ɔbɛhwɛ w’anim?” asafo Yehowa asɛm ni. 9 “Enti afei, mepa mo kyɛw, monsrɛ Onyankopɔn* na onhu yɛn mmɔbɔ. Sɛ saa nneɛma yi na ɛwɔ mo nsam a mode rebɛbɔ afɔre a, ɔbɛhwɛ mo anim anaa?” asafo Yehowa asɛm ni. 10 “Mo mu hena na obeyi ne yam atoto apon* no mu?+ Efisɛ m’afɔremuka so gya mpo, mosɔ a, mugye biribi.+ M’ani nnye mo ho, na mo nsam akyɛde afɔre biara nni hɔ a m’ani gye ho,”+ asafo Yehowa asɛm ni. 11 “Efi apuei kosi atɔe,* me din bɛyɛ kɛse wɔ aman nyinaa mu.+ Na wɔbɛhyew afɔrebɔde wɔ baabiara, na wɔabɔ afɔre de ahyɛ me din anuonyam sɛ akyɛde a ɛho tew, efisɛ me din bɛyɛ kɛse wɔ aman nyinaa mu,”+ asafo Yehowa asɛm ni. 12 “Nanso mubu no animtiaa*+ ka sɛ, ‘Yehowa pon ho agu fĩ; aba a ɛwɔ so, kyerɛ sɛ, ɛso aduan yɛ adehunu.’+ 13 Mosan ka sɛ, ‘Hwɛ! Ɔbrɛ bɛn ni!’ Mohwɛ a, na moanyinyan mo anim,” asafo Yehowa asɛm ni. “Mode mmoa a moakowia, ne mmoa a wɔyɛ mpakye, ne mmoa a wɔyare na ɛba. Yiw, akyɛde a ɛtete saa na mode brɛ me! Eyi na mopɛ sɛ migye wɔ mo nsam anaa?”+ Yehowa asɛm ni. 14 “Nnome nka onitefo a ɔwɔ odwennini a ɔte apɔw wɔ ne nguan mu, nanso sɛ ɔhyɛ bɔ a ɔde nea wadi dɛm na ɛbɔ afɔre ma Yehowa. Meyɛ Ɔhenkɛse,+ na me din bɛma amanaman no abɔ hu,”+ asafo Yehowa asɛm ni.
^ Ɛkyerɛ, “Me Somafo.”
^ Anaa “owura kunini.”
^ Anaa “obu.”
^ Anaa “monhwehwɛ Onyankopɔn anim dom.”
^ Ɛbɛyɛ sɛ ɛyɛ asɔrefi no apon a wɔde ahyɛ ebinom nsa.
^ Anaa “owiapuei kosi owiatɔe.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “mubu me animtiaa.”